Shiinaha Custom Dog side Dog-saareyaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Waxyaabaha la xiriira xayawaanka Waxyaabaha la xiriira xayawaanka > Boorsada side eyga
Bacda boorsada eyda
1. Ayaa ubaahan boorsada eyga:
Kahor intaanan ogayn inay jiraan waxaas oo kale, waxaan isticmaalay boorsada weyn ee cowska ma garanayo sida loogu qaado si sax ah labadoodaba waxaan dareemay raaxo darro aad u weyn waxaan u maleynayaa inay jiraan laba nooc oo eyda iska leh oo sida ugu badan uga faa'iideysan doona eeyga xirmo: reer magaal, dad firfircoon iyo dad aan socon karin eeyaha waqti dheer.
(2) Haddii aad ku nooshahay magaalo sideyda oo kale aadna firfircoon tahay, markaa waxaad jeclaan laheyd inaad qaadatid boorsada eyga Hada, si fudud ayaan baaskiil ula raaci karaa eeygaaga, u gee dukaanka raashinka (wuxuu ka cabanayaa walaac kala go 'ah , sidaa darteed ma haysto dooq aan ka aheyn inuu isaga ka tago dukaanka) ama inuu raaco gaadiid dadweyne.Marka aan xitaa u kaxeeyo qolkiisa qolka dhadhamiska khamriga.Waxaan dhigay kursiga keydka hoostiisa mana jirto cid xitaa dareentay. , waxaan ku qaadnay safar doon ah. Faa'iidada weyn ee ugu weyn ayaa ah inuu jecel yahay culeysyada ama xamuulka. Waa curler, sidaa darteed wuxuu jecel yahay inuu hoos u dhaco oo uu ku seexdo Meelo adag. Aad buu u fiican yahay.
(3) Waxaan u maleynayaa in boorsooyinka eyda ay si gaar ah ugu habboon yihiin dadka reer magaalka ah ee eyda leh. Gaar ahaan haddii aad aad u isticmaasho gaadiidka dadweynaha ama aad raacdid baaskiil, waa inaad keentaa boorsada. Xitaa haddii eeyaha aan loo oggoleyn inay raacaan gaadiidka dadweynaha, Eyga yar ayaa la arki doonaa inta badan xirmooyinka eeyaha Awards! sidoo kale waxaan aad u jecelahay xalkaan maxaa yeelay uma baahnid baabuur si aad u yeelato eey. Bacda eyga ayaa kaliya kaa dhigi doonta mid aad u dabacsan. waa in
(4) Sidee kooxda labaad ee milkiileyaasha eyda ay u leeyihiin eeyo aan socon karin waqti dheer.Haddii aad jeceshahay socodka, laakiin boorsada aysan ku raaci karin adiga maalinta oo dhan, markaa side boorsada ayaa ah xalka ugu fiican.
Calaamadaha kulul: Boorsada side Dog, Shiinaha, saarayaasha, shirkado, warshad, kartoo, qiimaha, oraah, in stock